Notoloran’ny Wikipedia Okrainiana Loka Ireo Nandresy Tamin’ny Fifaninanan-tsary ‘Wiki Mankafy ny Tany’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2017 6:09 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Deutsch, عربي, Ελληνικά, Français, 繁體中文, 日本語, English
Fitrandrahana vato “Dovbush Rocks”, Ivano-Frankivsk Oblast, sary avy amin'i Pavlo Pivovar, tao amin'ny Wikimedia Commons CC BY-SA.
Nanome mari-pankasitrahana ho an'ireo mpaka sary nasionaly misa 11 voalohany tamin'ny fifaninanan-tsary iraisam-pirenena ‘Wiki Mankafy Ny Tany’ izay mankalaza ny tsangambato voajanahary sy ny faritra voaaro ny Wikipedia Okrainiana.
Natao tao amin'ny Mozean'ny Siansa Momba Ny Natiora tao Kiev ny 7 Oktobra 2017 lasa teo ny lanonana fanolorana ny loka, ary nahitana ny fampirantiana ireo sary mpandresy.
Naharay sary miisa 15.000 mahery izay mampiseho ireo lova voajanahary maherin'ny 1.860 avy amin'ny mpandray anjara miisa 356 nandritra ny volana Mey ny andiana fifaninanana manerantany Okrainiana. An'arivony tamin'ireo sary ireo no efa nampiasaina mba hanomezana fanazavana ny lahatsoratra Wikipedia amin'ny fiteny samihafa.
Ireo mpandray anjara tamin'ny lanonana fanolorana loka ho an'ny Fifaninanana Okrainiana “Wiki Mankafy ny Tontolo 2017″ tao amin'ny Mozea Nasionaly ho an'ny Siansa Momba ny Natiora tao Kiev, 7 Oktôbra 2017. Saripikan'i Anna Kondratyuk tao amin'ny Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Nahazo diplaoma fahatsiarovana sy loka hafa avokoa ny mpandresy rehetra: fahatsiarovana miaraka amin'ny sary famantarana ny fifaninanana na fanomezana mari-pankasitrahana ho an'ny tranombarotra antserasera.
Natolotra ireo tompon'ny sary miisa 11 izay nahazo ny isa ambony indrindra avy amin'ny mpitsara ireo loka, sy ireo mpandray anjara tamin'ny fifaninanana ihany koa izay naka sary ny ankamaroan'ireo fotokevitra ary nahazo ny isa betsaka indrindra tao anatin'ny fifantenana.
Loka maro hafa no natolotry ny fikambanana hafa mifandray amin'ny fifaninanana. Ohatra, ny mpiasa ao amin'ny Valan-javaboary Holosiivskyi, ao amin'ny faritra an-tanàndehiben'i Kiev, dia nisafidy ireo sary telo tsara indrindra natolotra tao amin'ny fifaninanana voafaritra tao anatin'ny vala-javaboary.
Fanampin'izany, nahitana loka karazany maro tamin'ny sokajy manokana ihany koa ny fifaninanana nasionaly :
“Fahitana Mahatsiravina”, fanadihadiana ny famotehana ny toeram-ponenana voajanahary , notarihin'ny ONG momba ny tontolo iainana.
‘Manazava’ ny lohahevitra izay manana sary tsy hita ao amin'ny Wikipedia
Sary tsara indrindra momba ny biby sy ny zavamaniry , ary
Sary tsara indrindra avy ao Kiev
Ny tselatra teo amin'ny toeran'ny zavaboary Kamyana Mohyla tao Zaporizhia Oblast. Sary avy amin'i Anatoliy Volkov tao amin'ny Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Nandray anjara tamin'ny fifaninan-tsary manerantany ” Wiki Mankafy Ny Tany” ny Wikipediana avy amin'ny firenena miisa 36. Naseho tao amin'ny fampirantiana iraisana ho an'ny Wikimedia Commons ireo sary voalohany nandresy momba ny lova voajanahary – toy ny valan-javaboary, ny faritra fiarovana ny tontolo iainana, ny valan-javaboarim-pirenena sy ny faritra tsara tarehy/mahafinaritra .
Nampiasa ny tenirohy #WikiMankafyNyTany ny mpikarakara sy ny mpandray anjara mba hamoahana ireo sary sy hampiroboroboana ny toetsaina tia mizara. Nahavita nanangona sary miisa 137.000 mahery izy ireo.
Voropotsy Eoraziana (Platalea leucorodia) ao amin'ny Tahirin-javaboary Danube, sary avy amin'i
Sergey Ryzhkov tao amin'ny Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Avy any Eoropa Afovoany sy Atsinanana ny iray ampahadimin'ny firenena nandray anjara, anisan'izany i Bolgaria izay nahitana ny fifaninanana nasionaly notaterina tao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny Global Voices teo aloha.